ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးအား ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၊ ကရုဏာပြုတော်မူပါ၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအဖြာဖြာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ လမ်းမှန်တရားချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ စားနပ်ရိက္ခာချီးမြှင့်တော်မူပါဟု အမြဲတောင်းခံလေ့ရှိ၏။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးအား ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၊ ကရုဏာပြုတော်မူပါ၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအဖြာဖြာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ လမ်းမှန်တရားချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ စားနပ်ရိက္ခာချီးမြှင့်တော်မူပါဟု အမြဲတောင်းခံလေ့ရှိ၏။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရမည့်ပုံစံ။ .
အိဗ်နုအဗ္ဗာစ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးအား ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၊ ကရုဏာပြုတော်မူပါ၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအဖြာဖြာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ လမ်းမှန်တရားချီးမြှင့်တော်မူပါ၊ စားနပ်ရိက္ခာချီးမြှင့်တော်မူပါဟု အမြဲတောင်းခံလေ့ရှိ၏။
အိဗ်နုအဗ္ဗာစ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ဆင့်ပြန်ပြောကြားသည်။ “တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် - အလ္လာဟုမ္မဂ်ဖိရ်လီဟု အမြဲရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။” ဆိုလိုသည်မှာ - ကိုယ်တော်မြတ်သည် ဤဒုအာကိုစဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် အမြဲတောင်းခံလေ့ရှိသည်။ ဆွလာသ်တစ်ခုလုံးသည် ဇိက်ရ် သတိရတသခြင်းနှင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ဖတ်ရွတ်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သောကြောင့် ဖရ်ဿွ်ဆွလာသ်နှင့် နဖ်လ်ဆွလာသ်ကြားတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ဤဒုအာကို တောင်းခံနိုင်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ဩဝါဒဖြစ်သည့် “ကျွန်တော်မျိုးအား ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ” ၏ အလိုသဘောမှာ - အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူတော်မမူဘဲ အပြစ်များကို ဖုံးကွယ်ပေးသနားတော်မူပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက် “ကရုဏာပြုတော်မူပါ”၏ အလိုသဘောမှာ- ကျွန်တော်မျိုး၏ အပြစ်များကို အရေးမယူဘဲ ဖုံးကွယ်ပေးတော်မူကာ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဌာနစလုံးတွင် ကျွန်တော်မျိုးအဖို့ ကောင်းကျိုးများဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကျေးဇူးတော်များပါရှိသော မဟာကရုဏာတော်အား ကျွန်တော်မျိုးကို ချီးမြှင့်တော်မူပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် “ငြိမ်းချမ်းမှုအဖြာဖြာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ”၏အလိုသဘောမှာ- အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး၏ သာသနာရေး၌ အပြစ်အကုသိုလ်များနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စတို့မှ ကင်းစင်ကာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ ကျွန်တော်မျိုး၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ ရောဂါဝေဒနာများမှလည်းကောင်း ကျွန်တော်မျိုး၏ အသိဉာဏ်၌ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် ရူးသွပ်ခြင်းတို့မှလည်းကောင်း ကင်းဝေးစေကာ ကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကို ချီးမြှင့်တော်မူပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ရောဂါများအနက် အကြီးမားဆုံးရောဂါမှာ လမ်းမှားစေသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးဒုက္ခရောက်စေသည့် အလိုရမ္မက်များကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်နှလုံးသား၏ ရောဂါပင်ဖြစ်သည်။ “လမ်းမှန်တရားချီးမြှင့်တော်မူပါ”၏အလိုသဘောမှာ ‘ဟိဒါယဟ်’ လမ်းမှန်တရား နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမအမျိုးအစားမှာ- လမ်းမှန်တရားကို ညွှန်ကြားပြသပေးသည့် ဟိဒါယသ်ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားသည် မွတ်စ်လင်မ်ဖြစ်စေ၊ ကာဖိရ်သွေဖည်ငြင်းပယ်သူ ဖြစ်စေ နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၌ လာရှိသည်မှာ-(ထို့ပြင် ဆမူဒ် အမျိုးသားတို့မှာမူကား အမှန်စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အား တရားလမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သည် )(ကုရ်အာန် -၄၁ :၁၇) ဆိုလိုသည်မှာ- ငါအရှင်မြတ်သည် ၎င်းတို့အား လမ်းမှန်တရားကို ညွှန်ကြားပြသတော်မူခဲ့သည်။ဒုတိယအမျိုးအစားမှာ- လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းနှင့် လက်ခံသဘောတူခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဟိဒါယသ် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားကို အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူများသာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ထိုဟိဒါယသ် အမျိုးအစားကိုပင် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ- ကျွန်တော်မျိုးအား အမှန်တရားကို ချီးမြှင့်တော်မူပြီး ထိုအပေါ်၌ တည်တံ့ခိုင်မြဲစေတော်မူပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် “စားနပ်ရိက္ခာချီးမြှင့်တော်မူပါ”၏ အလိုသဘောမှာ- အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးအား ဤလောကီဘဝ၌ အရှင်မြတ်၏ အဖန်ဆင်းခံတို့ထံမှ လိုလားတောင့်တမှု ကင်းစေသော ရိုဇီရိက္ခာမျိုးကို ချီးမြှင့်တော်မူပါ။ နောင်တမလွန်ဘဝ၌လည်း အရှင်မြတ်က သုခချမ်းသာ ဂုဏ်ကျေးဇူးပြုခဲ့သည့် အရှင်မြတ်၏ကျွန်များအတွက် အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသော ကျယ်ဝန်းလှသည့် ရိုဇီရိက္ခာမျိုးကို ကျွန်တော်မျိုးအား ချီးမြှင့်တော်မူပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထိုင်ရန် တရားတော်က ပြဌာန်းထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို အခြားသော ဟဒီးဆ်တော်များတွင်လည်း အတည်ပြုထားသည်။
စဂ်ျဒဟ်နှစ်ခုကြားတွင် ရဗ်ဗိဂ်ဖိရ်လီ သို့မဟုတ် အလ္လာဟုမ္မဂ်ဖိရ်လီ ကိုရွတ်ဆိုရန် အရေးကြီးသည်။
စဂ်ျဒဟ် နှစ်ခုကြားတွင် ဖတ်ရသော ဒုအာကို ဟဒီးဆ်တော်တွင် လာရှိသည့်အတိုင်းရွတ်ဆိုခြင်းသည် အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ အကယ်၍ ထိုသို့ရွတ်ဆိုရာတွင် အတိုး၊အလျော့ဖြစ်သွားလျှင်လည်း ဆွလာသ်မပျက်ပါ။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရမည့်ပုံစံ။ .
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဇိက်ရ်တော်များ။ .
သူသည် စလာမ်လှည့်ပြီးသည့်အခါ ဆွလာသ်တိုင်း၏နောက်တွင် ဤသို့ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အတုမဲ့အနှိုင်းမဲ့၍ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုအပေါင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဟူသမျှသည်လည်း ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းအလုံးစုံကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကောင်းမှုများ ပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စွမ်းအားပေးသနားတော်မူခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ နိအ်မသ် စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့် ကျေးဇူးတရားအဖြာဖြာတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှသာလျှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ကာဖိရ်များ မနှစ်သက်ကြစေကာမူ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အိခ်လာဆွ်ဖြင့် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။
ငါကိုယ်တော်သည် အရိုးအဆစ်ခုနှစ်ခုပေါ်တွင် စဂ်ျဒဟ်ဦးချရန် အမိန့်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ နဖူး၊ (ကိုယ်တော်သည် မိမိ၏လက်ဖြင့် မိမိနှာခေါင်းအား ညွှန်ပြခဲ့သည်။) လက်နှစ်ဖက်၊ ဒူးနှစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်၏ ခြေချောင်းများဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့သည် အဝတ်များ၊ ဆံပင်များကို စုပြီးကိုင်မထားရန် အမိန့်ပေးခြင်းခံရသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် မိမိ၏ဆွလာသ်အား အဆုံးသတ်ပြီးသည့်အခါ “အတ်စ်သဂ်ဖိရုလ္လာဟ်” သုံးကြိမ်နှင့် “အလ္လာဟွမ္မ အန်သတ်စ် စလာမု ဝမင်န်ကတ်စ် စလာမု သဗာရက်သ ယာဇလ်ဂျလားလိ ဝလ်အိက်ရာမ်”ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း